February 2015 - Page2of3- DVB Multimedia Group
· by DVBDadmin · 18 Feb, 2015
About the next debate:Returning Experts
စစ်အာဏာရှင်စနစ်တစ်ခုအောက်မှာရှိခဲ့တဲ့ နှစ်ကာလရှည်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံရေးမတည် ငြိမ်မှု၊ စီးပွားရေးနိမ့်ကျမှု၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးမှု နဲ့ အရည်အချင်းထက် နီးစပ်ရာကိုသာ နေရာပေးတတ်တဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ခဲ့တာတွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံက ကျွမ်းကျင်သူ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်တွေဟာ မိမိတိုင်းပြည်ကိုစွန့်ခွာပြီး တိုင်းတပါးကို အလျှိုလျှိုထွက်ခွာသွားကြပါတယ်။ အများစုဟာ ၁၉၈၈ ခုနှစ် လူထုအုံကြွမှုအပြီး စွန့်ခွာသွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို သာမန်အားဖြင့် ကြည့်လိုက်ရင် ရေကြည်ရာမြတ်နုရာဆီသို့လို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် ဒါဟာ တိုင်းပြည်အတွက် ကြီးမားတဲ့ ဦးနှောက်ယိုစီးမှုပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကနေ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာသွားရောက်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားဦးရေ...
· by DVBDadmin · 14 Feb, 2015
Highlights of the Mobile Access Debate
The best quotes of the DVB Debate about ‘how Mobile Access changes lives?’. You can also download these in PDF under this link: dvbdebate.net/press.. The 45 minute program will be aired first this Sunday...
· by DVBDadmin · 13 Feb, 2015
Mobile Access: Facts & Figures
This week DVB Debate will discuss how the new increasing access to mobile internet is changing lives of the Burmese. Get ready to join the debate and read the 1-pager with the most important...
Next on DVB Debate: Mobile Access
လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး တစ်နယ်နဲ့တစ်နယ် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့ လွန်စွာမှခက်ခဲလှတဲ့ နှစ်ကာလ ပေါင်းများစွာကို ကျော်လွန်ပြီး ဒီကနေ့အချိန်မှာတော့ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှုတွေကို လက်လှမ်း မှီနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ သုံးစွဲနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ မိုဘိုင်ဖုန်းတွေကနေတစ်ဆင့် အင်တာ နက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပါ ရယူသုံးစွဲနိုင်ပြီး လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေနဲ့လည်း ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးသမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရင် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ ဆယ်လူလာလို့ခေါ်တဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းကို မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း စတင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မိုဘိုင်းဖုန်းစုစုပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်လောက်ပဲရှိသေးပါတယ်။ အဲဒီနောက်...
· by DVBDadmin ·9Feb, 2015
Highlights of Aung San’s Legacy Debate
The best quotes of the latest debate, carefully selected by the editorial staff, free to use in other publications, as long as credited to ‘DVB Debate’ or just out of interest. You can also...